Iintlobo zeeNgqungquthela kwiMathematika
Kwiimathematika, ngokukodwa i-geometry, ii-angles zenziwe yimimitha emibili (okanye imigca) eqala kwinqanaba elifanayo okanye ukwabelana ngesiphelo esifanayo. I-angle lilinganisa inani lokujika phakathi kweengalo zombini okanye macala e-angle kwaye ngokuqhelekileyo lilinganiswa kumadiresi okanye ngama-radians. Apho le mibala emibili idibanisa okanye idibene ibizwa ngokuba yi-vertex.
I-angle ichazwe ngumlinganiselo wayo (umzekelo, iidridi) kwaye ayixhomekeke kubude bamacandelo ekota.
Igama elithi "angle" livela kwisiLatini igama elithi angulus , elithetha "ikona." Inxulumene negama lesiGrike elinentsingiselo ethi "iphosakekile, iphihliweyo," kunye neliNgesi elithi "i-ankle." Ezo zombini amagama aseGrike kunye nesiNgesi avela kwiLizwi le-proto-Indo-Yurophu elithi " ank-" elithetha "ukugoba" okanye "ukuqubuda."
Iibhilo eziyi-90 degrees zibizwa ngokuba yii-angles ezifanelekileyo. Iibhilo ezingaphantsi kwama-degrees angama-90 zibizwa ngokuba ngama -angles acute . I-angle engama-180 degrees ebizwa ngokuba yinqanaba elichanekileyo (oku kuvela njengomgca ochanekileyo). Iibhentshi ezingaphezu kwama-90 degrees kwaye ngaphantsi kwama-degrees angu- 180 zibizwa ngokuba ngama- obtuse angles . Iibhentshi ezinkulu kuneendlela eziqhelekileyo kodwa ukujika kwe-1 (phakathi kwama-180 degrees kunye nama-360 degrees) kuthiwa yii-reflex angles. I-angle engama-degrees angama-360, okanye alingana nokujika okupheleleyo, kuthiwa i-angle epheleleyo okanye i-angle epheleleyo.
Ngomzekelo wendlela e-obtuse, i-angle ye-roof roof house edlalwa kwinqanaba le-obtuse.
I-angle e-obtuse ingaphezu kwama-degrees angama-90 ukususela ngamanzi bekuza kubetha phezu kwephahla (ukuba kwakungama-degrees angama-90) okanye ukuba uphahla lwangenalo i-angle engezantsi yokuhambisa amanzi.
Iibhilo zidla ngokuba ngamagama usebenzisa iilfabhethi iincwadi ukuze zichonge iindawo ezahlukeneyo ze-angle: i-vertex kunye nemitha nganye.
Umzekelo, i-angle BAC, ibonisa i-angle nge "A" njenge-vertex. Ihlanganiswe yimitha, "B" kunye ne "C." Ngamanye amaxesha, ukwenza kube lula ukubizwa ngegama, libizwa ngokuba yi "angle A."
IiNgqungquthela eziMpawu kunye neeNtshonalanga
Xa imigca emibini eqondekileyo idibanisa kwinqanaba, iimbombo ezine zenziwa, umzekelo, "A," "B," "C," kunye ne "D".
Iindidi zeengcongolo ezibhekiselelane, zenziwe ngamacangca amabini anqamlekileyo ayenzela i-"X" efana neyimilo, ebizwa ngokuba ngama-angles angama-angles okanye ii-angles eziphambene. Iinjongo ezichaseneyo zibonakaliso zemibukiso yomnye nomnye. Isilinganiso seengangele siya kufana. Ezi zibini zithiwa kuqala. Ekubeni ezo zengxube zinomlinganiselo ofanayo wee-degrees, ezo ngqungquthela zibhekwa njengento elinganayo okanye i-congruent.
Ngokomzekelo, yenza sengathi incwadi "X" ngumzekelo walezo zibane ezine. Inxalenye ephezulu ye "X" yakha uhlobo lwe "v", oluya kuthiwa "i-angle A." Iqondo lelo ngqungqutyana lifana nendawo engezantsi ye-X, eyenza uhlobo "^", kwaye oluya kuthiwa "nge-angle B." Ngokufanayo, amacandelo amabini "X" afaka ">" kunye ne "<". Ezi ziza kuba zi-"C" kunye "D." Bobabini C kunye noD bazakwabelana ngeedridi ezifanayo, zichasene ngeenglese kwaye zihlangene.
Kulo mzekelo, "i-angle A" kunye "neC angle C" kwaye ziphakathi komnye nomnye, babelana ngengalo okanye icala.
Kwakhona, kule mzekelo, ii-angles zongezelelekileyo, oko kuthetha ukuba nganye yee-angles ezidibeneyo zilingana nama-degrees angama-180 (enye yale mizila eqondekileyo eyadibanisa ukwenza ii-angles ezine). Kuyafana okufanayo "nge-angle A" kunye ne "angle D."
I-Battle of Concepcion
Ukuhamba ngeebhayisikili zokulahlekelwa kwesisindo
CS Lewis kunye neMigomo yokuPhikisana
Iingxabano kunye Nxamnye nexesha eliPhakamileyo kwiSikolo sokuQala isiXhosa
Quotes Cute Boyfriend
Iingcebiso zokuPhucula iSipelo sakho
Imitshato e-Best Sitcom